Fizahan-tany any amin'ny nosy Monserrat | Fitsangatsanganana tanteraka
Fizahan-tany any amin'ny nosy Monserrat
Karaiba tanteraka | | Karaiba
Nosy kely misy volkano, naorin'ireo mpifindra monina irlandey nandositra ny fanenjehana, dia Montserrat, izay miala amin'ny lalan'ny karaiba.
Ny habeny dia kely (39 kilaometatra toradroa). Manana morontsiraka, havoana, ala, renirano ary riandrano mahafinaritra izy. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe "Nosy Emerald an'ny Karaiba" ary izy irery no nosy any amin'ny West Indies izay manana ny Andron'i St. Patrick ho fetim-pirenena. Ny fitsangatsanganana an-tongotra, ny fijerena natiora ary ny fiakarana no fomba tena tianao handaniana andro ao amin'ny nosy. Faritany britanika ampitan-dranomasina izy io.
Ny fipoahan'ny volkano lehibe iray nanomboka tamin'ny 1998 dia nanova tanteraka ny fiainana tao amin'ilay nosy. Ny renivohitra Plymouth Rakotra lavenona sy fikorianan'ny pyroclastic izy ary potika tanteraka. Voarara ny fidirana amin'ny antsasaky ny nosy. Ny fipoahana lehibe farany dia tamin'ny volana jolay 2004 rehefa nanjary lavenona indray ilay nosy. Ny hetsiky ny volkano dia manara-maso ny Montserrat Volcano Observatory.
Noho ny fipoahana dia nihena ny mponina hatramin'ny 11.000 ka hatramin'ny 4.500. Na izany aza, miroborobo indray ny fiainana any amin'ny faritra avaratry Montserrat. Tsy nisy ny aina nafoy tany ivelan'ny faritra nakatona. Ny seranam-piaramanidina taloha dia ravan'ireo fipoahana, saingy misy seranam-piaramanidina vaovao misy sidina mahazatra avy any Antigua.
DestinationsHistoriaAbout usOciotoerana manodidinatora-pasikampizaha tany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fizahan-tany any amin'ny nosy Monserrat
Gallaratese, toeram-ponenan'i Monte Amiata
Ny reniranon'i Russia